Fitsarana Tampony : Fananganan-tsaina narahan’ny lahateny nataon’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana
Fitsarana Tampony Anosy : fananganan-tsaina, narahin’ny lahateny nataon’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Andriamatoa IMBIKI Herilaza, sy ny fanolorany fanomezana, solosaina miisa 20 sy « onduleurs » avy amin’ny tenany manokana ho fanampiana amin’ny fanatsarana ny asa.
Laharam-pahamehana ho an’ny Governemanta:
Ady amin’ny tsy fandriam-pahalemana sy ny VBG
Hentitra ny toromarika nomen’Adriamatoa Praminisitra Lehiben’ny Governemanta. Laharam-pahamehana ho an’ny tontolon’ny Fitsarana ny ady amin’ny tsy fandriam-pahalemana sy ny herisetra mianjady amin’ny maha-vavy na maha-lahy (VBG). Tsy hisy fitsitsiana na fandeferana ny raharaha momba ireo. Tafiditra ao ohatra ny halatr’omby sy ny vonoan’olona.
Anisan’ny nivoitra ireo androany Alatsinainy 04 Oktobra 2021, nandritra ny lahateny nataon’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Andriamatoa IMBIKI Herilaza, taorian’ny fananganan-tsaina natao teny amin’ny Fitsarana Tampony, Anosy. Nohamafisiny ihany koa ny fanaraha-maso efa natomboka, mikasika ireo famoahana voafonja tsy ara-dalàna, ary ny fanentanana ireo Mpitsara sy Mpiraki-draharaha amin’ny fanafainganana ny raharaham-pitsarana, hanatrarana ny taha 70/30 (70% n’ny voafonja no ho voatsara, ary 30% sisa no hiandry fitsarana) mialoha ny faran’ny taona.
Ankoatra izay, dia nanolotra fanomezana, solosaina miisa 20 sy « onduleurs » avy amin’ny tenany manokana, ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Andriamatoa IMBIKI Herilaza, ho fanampiana amin’ny fanatsarana ny asa.